Mee ka onye ọka iwu zara ajụjụ gị taa, hie ụra abalị nke ọma. Anyị ga - enyere gị aka ugbu a. - NJ & NY Real Estate, Probate, agbachitere mgbanyụ na ndị ọka iwu enweghị ego
Ederede: (917) 687-4219
Denye aha na soro
Kpọọ ugbu a Maka Oge Nnọ Ọchịchị n'efu(844) 533-3367
NJ & NY Real Estate, Probate, agbachitere mgbanyụ na ndị ọka iwu na-ezighi ezi
OZI ANA EGO
Mpempe akwụkwọ mgbapu ụlọ
Onye ọka iwu Jersey City Real Estate
Nyocha gbasara ụlọ ala
Mgbanwe ego mgbazinye
Ikpe ịgba akwụkwọ
Okwu ikpe & mkpezi
EKWỤKWỤKWỌ NDỊ DỊ N'IME
NWAANYI EGO EGO
Mee ka onye ọka iwu zara ajụjụ gị taa, hie ụra abalị nke ọma. Anyị ga - enyere gị aka ugbu a.
Kwụsị ọrịre Sheriff
Ire na nyocha nyocha nke ire
Translọ azụmaahịa ụlọ obibi na azụmaahịa
Probate, Wills, Trusts, na ịgba akwụkwọ
Mgbapụta ụtụ ụtụ
Ego nke 13
Ego nke 7
Ego nke 11
Anyị gafere nhọrọ gị niile iji nyere gị aka ime atụmatụ ma chọpụta ụzọ kachasị mma ị ga-esi rụọ ọrụ. Anyị bụ ụlọ ọrụ iwu na-arụ ọrụ nwere ọrụ yana ndị ọka iwu dabere na Jersey City, NJ; Hackensack, NJ; Freehold, NJ; na Brooklyn, NY. nke ahụ nwere ọtụtụ ndị ọka iwu ndị raara onwe ha nye inyere gị aka.
GIMME MY FREE IN-DEPTH STRATEGY SXTION ya na onye ọka ikpe taa!
Anyị ga-eme ihe 3 na nzukọ a:
Anyị ga-ege gị ntị.
Anyị ga-agafe nhọrọ gị niile.
Anyị ga-akwado ihe edere ede banyere ikpe gị ị nwere ike iburu onye ọka iwu ọzọ ma ọ bụrụ na ị họrọghị isoro anyị.
Olee otu anyi nwere ike isi nyere gi aka?
Ejiri nkwa nzuzo nke 100%
Kpọtụrụ ndị ọka iwu nchebe New York ma ọ bụ New Jersey taa.
Offlọ ọrụ iwu Patel, Soltis & Cardenas na-azụta ikike iwu kachasị mma na New York na New Jersey, na-elekwasị anya na ịgba akwụkwọ ịgbazigharị, mmezigharị mgbazinye ego, itinye ego na probate na azụmahịa ụlọ na New Jersey. Ọ bụrụ n’uche ị nwere ike ịchọrọ NJ onye ọka ikpe onye ọka iwu or Onye ọka iwu NY na-ahụ maka mbubata bido site na ịgwa otu onye okwu n'efu taa. Anyị bụ ụlọ ọrụ gbakwasara ụkwụ na-elekwasị anya n'ijere ndị mmadụ ozi na azụmaahịa ha. Ma ịchọrọ mgbamgba mkpuchi ihu na New York ma ọ bụ New Jersey ma ọ bụ nke ezinụlọ gị. Anyị nwere ikike ịma iwu na nka maka gị. Nzọụkwụ mbu iji dozie nsogbu ọ bụla bụ ịghọta na ị nwere nhọrọ. Gwa onye ọka iwu taa ihe niile ịchọrọ.
TION nwere nhọrọ - ANY - NA-AKW USKWỌ NIILE !!
Jiri onye ọka iwu na-agbachitere mgbanarị iji chebe ikike gị.
Ọ bụrụ n’ịchọrọ izere igba mkpuchi ma ọ bụ nweta mgbanwe ego, kọọ onye ọka ikpe ịgbachitere mkpochapụ ugbu a ịgafe nhọrọ niile iji chekwaa ụlọ gị. Ihe niile ị na - eme taa ga - eme ka ị nwekwuo oge n'ọdịniihu. Iringgba onye ọka iwu nke maara iwu ihu ala bụ ihe mbu ị ga-eme iji hụ na ụlọ gị bụ ọrụ.
Isi nke 7 Ego: fromga site na ịdebanye na enyemaka enyemaka ụgwọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ozugbo.
A na-enye ndụmọdụ dị iche iche nke iwu n'usoro maka ego ma ọ bụ ụgwọ ndị ọzọ a na-ahụ anya
Dị ka ọka iwu New Jersey Estate, anyị ga - enyere gị aka ma ịchọrọ imeri ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ ma ọ bụ ịkwadebe Uche gị ka ezinụlọ gị wee nwee ike izere ịgba akwụkwọ n'ọdịnihu.
Gbazi ego na-agbanwe usoro nke ego inwere na mbụ. Nke a abụghịzigharị….
Mkparịta ụka mkpirisi ga-enwe mkparịta ụka dị n'etiti mmadụ abụọ ma ọ bụ karịa ma ọ bụ ndị ọzọ chọrọ ibute…
Ego nke 13 ga - akwụsị igba egbe…
Ikpe mkpezi nwere ike ịbụ nke afọ ofufo ma ọ bụ ihe amanye ya na ọ bụ ezie na ị ga-abụ ịkpa oke ikpe ga-abịa
Nwee Nyocha gbasara nhọrọ gị n'etiti gị n'efu
Kpọtụrụ anyị na anyị ga-emere gị ihe 3:
1. Anyị ga-agafe nsogbu niile gbasara iwu ị na-eche.
Nzọụkwụ mbụ anyị ga - eme bụ ige ntị n'ihe ndị metụtara ọnọdụ gị. Anyi choro ima ihe nile mere, ya na ihe ichoro ime. Anyị chọrọ ka ị jiri okwu nke aka gị gwa anyị ihe mere, na ihe mgbaru ọsọ ikpeazụ gị bụ maka ọnọdụ gị. Ọtụtụ oge anyị nwere ndị ahịa ji ụgwọ, na-eche nsogbu ndị ha nwere ike izere ma ha kwesịrị idozi. Ihe anyị kwadoro nwere dabere n’ihe ha nwara n’oge gara aga na ihe ha chọrọ ime n’ọdịnihu. Na ọnọdụ mgbapụta, enwere ọtụtụ ngwọta dị ka ịgba akwụkwọ ịgba akwụkwọ n'ụlọ ikpe steeti ma ọ bụ nke gọọmentị etiti, ịgbazite ụlọ ahụ, ire ụlọ ahịa ahụ na mkpụmkpụ mkpụmkpụ ma ọ bụ mgbe ọ bụla, akụ ezighi ezi (Na isi nke 7, isi 13 ma ọ bụ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ọnọdụ ahụ choro ya.) N’aghọtaghị akụkọ zuru oke gị, anyị enweghị ike ịbanye n'akụkụ ebe anyị na-ekwu maka nhọrọ.
2. Anyị ga-agafe Defenses na Nhọrọ ị nwere.
Ọnọdụ onye ọ bụla bụ ihe pụrụ iche, ọ bụghịkwa ihe ngwọta niile na-arụ ọrụ maka mmadụ niile. Mkpesa 7 isi nwere ike ịdị mma maka otu ezinụlọ, mana maka gị, ọ nwere ike ịkpalite Isi nke 7 Onye Achọrọ ịre ụlọ gị. Enweghị ịkọwa nkọwa gbasara ọnọdụ gị anyị enweghị ike ịnye nhọrọ nke ga-akacha mma maka gị. Ọ bụrụ na i mere mgbanwe mgbazinye n'oge gara aga, anyị ga-enyocha mgbanwe mgbazinye ego gị gara aga wee hụ ihe kpatara na agọnarị ya, anyị ga - enwe ike tụpụta otu esi enweta ya. Anyị ga-agwakwa gị ma ọ bụrụ na ego anaghị adị gị mma iji kwado gị ma ọ bụ chepụta atụmatụ ịbawanye ego gị. Ọ bụrụ n ’ị na-achọ ịgbachitere ụlọ gị n’ụlọ ikpe, anyị ga-agafe nyocha niile gbasara ụlọikpe ka anyị mara ma ị nwere ihe nchekwa ị chefuru. Anyị nwere okwu metụtara ọrụ na-adịghị mma, probate ihe na-eji inco
3. Anyị ga-akwadopụta ndepụta nkenke nke ọnọdụ gị ị nwere ike iburu ndị ọka iwu ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mma dị ka ndị ọka iwu gị.
Ọ bụrụ na anyị abụghị ndị egwuregwu maka gị dị ka onye ọka iwu, anyị ga-ezitere gị otu ihe edeturu nke anyị kwadebere n'oge Ajụjụ ọnụ anyị. Ọ ga-edepụta eziokwu nke ọnọdụ gị. Inwere ike iji ndị a ma ọ bụrụ na ịchọrọ ajụjụ ọnụ ndị ọka iwu ndị ọzọ mgbe anyị adaghị mma dị ka onye ọka iwu gị.
Anyị anaghị ewere okwu ọ bụla edepụtara anyị. Ọ bụrụ na anyị enweghị ike imeri gị, anyị ga-agwa gị. Anyị ga-enyocha nhọrọ gị niile, mana na njedebe nke ụbọchị, ọ bụrụ na anyị enweghị ike inyere gị aka, anyị ga-agwa gị.
Anyị nwere ndị ọka iwu na-elekwasị anya n'akụkụ dị iche iche nke iwu. Anyị nwere ndị ọka iwu ikikere nke New Jersey nke na-elekwasị anya na agbachitere mkpuchi nke mkpuchi ụlọ, ụlọ azụmahịa, ụlọ akụ, njikwa ego na mkpokọta ụgwọ. Anyị nwere ndị ọka iwu ikikere nke New York nke na-elekwasị anya na agbachitere mkpuchi nke mkpuchi ụlọ, ụlọ azụmahịa, ụlọ akụ, njikwa ego, Iwu ezinụlọ na nnakọta ụgwọ. Mgbe ị kpọtụrụ anyị, anyị ga-enwe mkpirikpi oge iji gbaa gị ajụjụ iji hụ na ị na-ejikọ aka na ọka ikpe nke nwere ike inyere gị aka n'okwu gị.
OP nwere nhọrọ - ANY US NA-AKW USKWỌ NIILE
Anyị nwere usoro nzọ ụkwụ nke 3 iji hụ na anyị nwere ike inyere gị aka, ma ọ bụ setịbe gị ka gị na onye ọka iwu dị iche nwere ndepụta okwu dị nkenke nke metụtara ọnọdụ gị. Anyị ghọtara na anyị bụ ndị tozuru oke maka onye ọ bụla, mana anyị ga - enyere gị aka ka ọka iwu ọzọ ị kpọtụrụ, ị ga - enwe ike ịza azịza ịchọrọ.
100% lekwasịrị anya na ikpe gị
Anyị nwere ike inyere gị aka ịkwadebe uche, yana ime uche / akwụkwọ ọgwụ dị elu, ma ọ bụ mepụta ntụkwasị obi iji kpuchido akụ gị. Ndị ọka iwu New Jersey nke ga-enyere gị aka dị ka onye na-emezu iwu nke
E hiwere ụlọ ọrụ a iji nyere aka ịchekwa ụlọ ndị mmadụ site na igwe ọkụ. Ndị otu anyị niile na-elekwasị anya na nchekwa nke mkpuchi na New Jersey ma ọ bụ New York. Anyi ghotara uzo eji eme ghari iji kpochapu okwu mkpochapu, imezi ndozi,
Mfufu ego, gụnyere itinye ego New Jersey na Bankkpata ego New York, bụ usoro ụlọ ikpe gọọmentị etiti enyere aka na ndị ahịa na ndị azụmaahịa wepu ma ọ bụ kwụọ ụgwọ ha ji ụgwọ n'okpuru nche nke ụlọ akụ. Iwu etiti
Lelee Ọrụ niile
Diskwụ Debgwọ ruptgba Efu
Pro Bono Hours Ọrụ
Peter na Veer bụcha aka ọrụ na azịza azịza ajụjụ anyị. Ha enwetabeghị na anyị nwetara azịza nke ajụjụ anyị mana enyere ihe ọmụma ziri ezi iji mee mkpebi ka mma. Magburu onwe ya.
Lee Nlereanya niile
GYNY mere anyị ji bụrụ ndị kacha mma?
Ọ bụrụ na ị na-achọ ịchọta ndị ọka iwu kachasị mma nke ghọtara ọtụtụ mpaghara iwu na New Jersey, anyị bụ ndị otu ndị ọka iwu nwere ahụmahụ ga-emeso gị ihe dịka onye ahịa. Anyị nwere ọtụtụ ndị ọka iwu na-eme iwu metụtara ihe gbasara ụlọ, ịgbazite ego, iwu agbachitere mkpuchi, ngbanwe mgbazinye ego, Bestzọ kachasị mma iji zụta ma ọ bụ ree ụlọ ala, Will & Powers of Attorney, Probate & Estates, Mkwụghachi ụgwọ, Mkpesa Onwe Gị, na azụmahịa Ego. Anyị ga-echebe ikike gị ka anyị na-arụ ọrụ dịka otu iji nye gị ezigbo enyemaka. Ndị ọka iwu anyị ghọtara ụzọ ụdị ụdị okwu a si arụ ọrụ. Anyị ga-echebe nzuzo gị ma ị kpọrọ anyị na ekwentị ma ọ bụ leta anyị n'otu n'ime Offlọ Ọrụ anyị maka ịgba izu. N'agbanyeghị etu ị họọrọ iji kpọtụrụ ụlọ ọrụ anyị, anyị ga-agafe nhọrọ gị.
Anyị nwere ọfịs na Jersey City, NJ gafere na Hudson County Courthouse; Hackensack, NJ gburugburu akụkụ si fromlọikpe Bergen County; Freehold, NJ gbada n'okporo ụzọ si ụlọ ụlọ Monmouth County, Manhattan, NY nwere saịtị na Midtown New York City; na Brooklyn, NY gafere na Countylọ Court County Court nke dị n'okporo ụzọ si n'ụlọ ikpe ịkụ akụ Brooklyn iji zute ndị ahịa anyị. Anyị na-enye ndị mmadụ ndụmọdụ na-akwụghị ụgwọ maka ọtụtụ okwu maka okwu ikpe niile na New Jersey na New York.
Biko kpọtụrụ anyị na (844) 533-3367 ma ọ bụ zitere anyị email na [Email na-echebe]
Tụkwasị obi na ahụmịhe anyị iji jeere gị mkpa iwu gị na akụnụba gị niile na 2018. Anyị na-akwụsi ike iji nyere gị aka.
Veer P. Patel, Esq.New Jersey - Onye Mmekọ
Derek (DJ) Soltis, Esq., MBA / MSNjikwa Ego Ego Ego - Onye Mmekọ
Lazaro Cardenas, Esq.Onye njikwa ahịa ụlọ
Jason C. Bost, Esq. , MBANew York - Onye Mmekọ
Lelee Ndị otu niile
Ọhụrụ Site na Blog
Ikike ndozi n ’ụlọ nkwupute NJ tupu yana mgbe ọre NJ Sheriff na-ere na mgbe ọ gasịrị
Ajụjụ banyere Ego 13 Kpata Ego
Lelee blọọgụ niile
Kedu ihe ga - eme ma ọ bụrụ na ahapụrụ m onye agbazi ụgwọ m ji m odida?
Ndi akwuru ugwo ubochi ugwo?
A na-elele nchekwa Social na-akpata na mmefu?
Na-ele Ajụjụ niile
1. Anyị ga-agafe nsogbu niile gbasara iwu ị na-eche. 2. Anyị ga-agafe Defenses na Nhọrọ ị nwere. 3. Anyị ga-akwadopụta ndepụta nkenke nke ọnọdụ gị ị nwere ike iburu ndị ọka iwu ndị ọzọ ma ọ bụrụ na anyị adaghị mma dị ka ndị ọka iwu gị.
Kpọtụrụ ugbu a Maka Oge Nnọ Ọchịchị n'efu
Idenye aha na Akwụkwọ Akụkọ ọnwa Anyị
Biko nye aha na adresị email gị iji denye aha na akwụkwọ akụkọ ọnwa anyị.
Citylọ Ọrụ Jersey City:
Ekwentị: (844) 533-3367
Ulo elu, Hackensack, NJ 07601
Holdlọ Ọrụ na-akwụghị ụgwọ:
(Site na Oge A)
Ụlọ okporo ụzọ 26
Officelọ Ọrụ New York City:
89 Market St., ala 4th,
Offlọ ọrụ iwu Patel, Soltis & Cardenas na-enye ndị ahịa nkwụnye ego, nnọchi anya na ngbanwe mgbazinye ego na Steeti New Jersey na New York na ụlọ ọrụ dị na Jersey City, Freehold, Hackensack, Manhattan, na Brooklyn. Weebụsaịtị a bụ Mgbasa Ozi Iwu. Ozi dị na webụsaịtị a bụ maka ebumnuche ozi gbasara naanị. Ekwesighi iwe ihe ọ bụla na saịtị a ka ndụmọdụ gbasara iwu maka okwu ma ọ bụ ọnọdụ ọ bụla. Ezubere ozi a iji mepụta, nnata ma ọ bụ ilele egosighi mmekọrịta onye ọka iwu. Anyị bụ ndị ọka iwu, mana anyị abụghị ndị ọka iwu gị ruo mgbe enyere onye na-ejide ya aka.
ATTMAT AD ỌR.. Nsonaazụ ndị gara aga anaghị ekwe nkwa ihe ga-eme n’ọdịnihu. Anyị bụ ndị ọrụ enyemaka ụgwọ. Anyị na-enyere ndị mmadụ aka ịdọrọ maka enyemaka n'okpuru Usoro Ego Ego.
Copyright © 2020 nke Patel & Soltis, LLC. Ikike niile echekwabara.
Kpọọ Attorney Ugbu a